USTEPHEN CHBOSKY USENOKUSHICILELA NGOBUHLE BEDISNEY KUNYE NERHAMNCWA - OMHLE KUNYE NESILWANYANA
Uyolo Ann Reid
Iiperks zokuba ngumbhali weWallflower uStephen Chbosky ngoMeyi weSkripthi sokuSebenza ngokuBuhle kunye neSilwanyana sokuQalisa kwakhona
I-Disney isenokuba yenze ukuthengwa okuxabisekileyo kwimfuno yabo yokwenza ukuqala kokusebenza kwakhona kwe-1991's Omhle kunye nesilwanyana Iyathandeka kuthi thina bakhulele kwifilimu yoqobo. Iprojekthi kuthiwa ifumene Iiperingi zokuba yiA Wallflower umbhali uStephen Chbosky, kwaye ngokwe Ukuzonwabisa ngeveki , ayisigeza ukucinga ukuba u-Emma Watson angazibandakanya neprojekthi kungekudala. Ndiyayithanda intembelo yenu, zihlobo!
Ngokudabukisayo, ukubandakanyeka kukaEmma mhlawumbi akukho nto ngaphandle kokucinga ngomnqweno kwi-EW, kodwa kukho ithuba lokuba siza kumbona njenge-Belle kwisimo esithile. Umdlali weqonga kunye nommeli weUN ngoku uqhotyoshelwe kuWarner Bros. ' Ubuhle , kodwa iprojekthi isakhangela umlawuli emva kokuphulukana noGuillermo del Toro ngoJuni, ke kunokwenzeka (ukuba akunakwenzeka ncam) Iiperks Umlingisi unokuphinda asebenze noChbosky.
Nokuba kunjalo, ndingathanda iDisney ukuqinisekisa ukunamathela kukaChbosky kule projekthi- ukuba kukho nabani na onokuthi ngobuchule azulazule ngokuthandana kwengxaki entliziyweni yefilimu yoopopayi, ngumbhali waBadala abaDala okhokele uninzi lwethu kubutsha bethu. Isilwanyana yinto nje ezukileyo yolutsha, emva kwayo yonke loo nto.
Le projekthi iza kuncediswa nguBill Condon, umlawuli weekugqibela ezimbini Ngorhatya Iimuvi (gulp), kwaye ziya kubandakanya umculo kwifilimu yoopopayi kunye nomculo weqonga.
Abaphindezeli beMarvel Cast kodwa ukuba bebonke bangama-80's Heartthrobs
Ummangaliso Wendalo Yonke
Kukho uLote wokukhupha kule ndlebe kaJohnny Depp Rolling Stone
Zama ukuba ungahleki njengokuba le Ndoda Izolile Imigca Emthubi ngelixa Ingxola [Ividiyo]
Ukuphinda ubuye kwakhona kwi-Gotham: Ukunyuka kwabahlali: Woyisiwe Ukuba Wenza…
I-Scarlet Overkill ye-Minions kunye neMeko yaBasetyhini abaBantu abaHlangayo ngamabali
izinto ezibonakala ngathi
loluphi ulwimi u-auld lang syne
isenzo esisigxina se-alchemist
amakhadi amhlophe angcono ngokuchasene nobuntu